Detoronomy 2 - Ny Baiboly
Detoronomy toko 2
Hatrao Kadesa-Barne ka hatramin'ny efitra Kademota - Ny nandresena an'i Sehona Amoreana.
1Dia nivily làlana isika, ka nandeha ho any an'efitra, amin'ny làlana mankany amin'ny ranomasina Mena, araka ny nandidian'ny Tompo ahy; ary ela isika no nihodina manodidina ny tendrombohitra Seira. 2Ary hoy Iaveh tamiko: 3Ampy izay ny nihodinanareo manodidina ity tendrombohitra ity, mandehana indray amin'ny làlana mianavaratra. 4Omeo teny ny vahoaka ataovy hoe: Hamaky ny tanin'ny rahalahinareo hianareo izao, dia ny taranak'i Esao, izay monina any Seira. Hatahotra anareo izy; 5nefa mitandrema tsara mba tsy hisy hifandiranareo aminy, fa tsy hanomezako anareo ny taniny, na dia eram-paladia aza; ny tendrombohitra Seira efa nomeko an'i Esao hananany azy.
6Ka aoka hovidinareo vola aminy ny hanin-kohaninareo, hovidinareo vola aminy na dia ny rano hosotroinareo aza. 7Fa efa nambinin'ny Tompo Andriamanitrao hianao, tamin'ny asan'ny tànanao rehetra; fantany ny nandehananao namaky ity efitra lehibe ity, fa efapolo taona izao no eo aminao Iaveh Andriamanitrao, tsy nanan-java-mahory hianao na inona na inona. 8Koa nandalo lavidavitra ny rahalahintsika zanak'i Esao izay monina any Seira isika, lavidavitra ny làlana amin'i Arabaha sy Elata ary Asiongabera; nivily isika dia nihazo ny làlana mankany amin'ny efitr'i Moaba.
9Hoy Iaveh tamiko: Aza manomboka ady amin'i Moaba, ary aza rafitra ady aminy, fa tsy hanomezako ho fanananareo ny taniny, na kely aza, satria Ara efa nomeko ho fananan'ny taranak'i Lota. 10Emima, vahoaka lehibe, maro isa sy lava toy ny Enakima, no nonina tany fahiny. 11Izy ireo koa heverina ho Rafaïma toy ny Enakima, nefa Emima no iantsoan'ny Moabita azy. 12Ny tany Seira koa fahiny, dia nonenan'ny Horeana, nefa noroahin'ny taranak'i Esao ireny nataony lany ringana teo anatrehany, dia izy ireo no nonina nisolo ireny, toy ny nataon'ny zanak'Israely tamin'ny tany ananany, izay nomen'ny Tompo azy. 13Koa ankehitriny, mitsangàna hianareo, ka mandehana mita ny ranon-driaka Zareda. Dia nita ny ranon-driaka Zareda isika.
14Valo amby telopolo taona no naharetan'ny diantsika hatrany Kadesa-Barne ka hatramin'ny nitantsika ny ranon-driaka Zareda, dia mandra-pahalany ritra tsy hisy eo an-toby intsony ny mpiantafika rehetra tamin'izany taranaka izany, araka ny efa nianianan'ny Tompo tamin'izy ireo. 15Fa ny tànan'ny Tompo koa no namely azy, mba handringana azy tsy ho eo amin'ny toby, mandra-pahalany ritra azy.
16Nony efa ringan'ny fahafatesana, tsy ho eo amin'ny vahoaka intsony ny lehilahy mpiantafika rehetra, 17dia niteny tamiko Iaveh nanao hoe: 18Mandehana amin'izao mamaky ny faritr'i Moaba, dia Ara, 19ka ho tonga any akaikin'ny taranak'i Amona hianao, nefa aza manomboka ady aminy, na mifanditra aminy, fa tsy hanomezako ho fanananao ny tanin'ny taranak'i Amona, na dia kely aza, satria efa nomeko ho fananan'ny taranak'i Lota izany. 20Natao ho tanin'ny Refaïma koa izany tany izany, fa fahiny dia nonina tao ny Refaïma izay nantsoin'ny Amonita hoe Zomzomima, 21vahoaka lehibe, maro isa sy lava toy ny Enakima. Naringan'ny Tompo ireny teo anoloan'ny Amonita izay nandriaka azy sy nonina nisolo azy; 22toy izany no nataon'ny Tompo ho an'ny taranak'i Esao izay monina any Sira, tamin'ny nandringanany ny Horeana, teo anoloany, dia noroahiny ireny, ka izy ireo no nonina nisolo ireny mandrak'androany. 23Ny Heveana izay nonina tamin'ny vohitra hatrany Gaza koa, dia naringan'ny Kaftorima, izay nivoaka avy tany Kaftora sy nonina nisolo ireny. 24Koa mitsangàna hianareo mandehana mita ny ranon-driaka Arnona. Indro atolotro eo an-tànanao Sehona mpanjakan'i Hesebona, Amoreana, mbamin'ny taniny. Atombohy ny fakana azy, ka tafiho izy. 25Hatramin'ny anio dia haeliko amin'ny vahoaka rehetra ambanin'ny lanitra ny horohoro aman-tahotra ny anaranareo; ka raha vao mandre ny lazanao izy dia hangovitra sy hangorohoro noho ny aminao.
26Teo an'efitra Kademota dia nandefa iraka hankany amin'i Sehona, mpanjakan'i Hesebona aho, nitondra tenim-pihavanana, nampilaza taminy hoe: 27Aoka mba hamaky ny taninao aho, dia homba ny làlam-be fotsiny, fa tsy hivily na ho amin'ny ankavanana, na ho amin'ny ankavia. 28Hamidinao vola amiko ny hanin-kohaniko; ny rano hosotroiko hatakalonao vola amiko; fa ny handalo mandeha tongotra fotsiny no tadiaviko. 29Efa nanao izany tamiko ny taranak'i Esao monina any Seira, sy ny Moabita monina any Ara mandra-pitako an'i Jordany, ho any amin'ny tany omen'ny Tompo Andriamanitray anay. 30Tsy nety namela antsika hamaky ny taniny anefa Sehona mpanjakan'i Hesebona; fa efa nohenjanin'ny Tompo Andriamanitrao ny fanahiny, ary efa nohamafisiny ny fony mba hanolorany azy ho eo an-tànanao araka ny hitanao amin'izao anio izao. 31Hoy Iaveh tamiko: Indro aho, nanomboka nanolotra anao an'i Sehona sy ny taniny. Atombohy ny fanafihana azy mba hahazoanao ny taniny ho fanananao. 32Dia nivoaka Sehona mbamin'ny vahoakany rehetra, mba hiady amintsika tao Jasà; 33ka natolotry ny Tompo Andriamanitsika sy noresentsika izy sy ny zanany ary ny vahoakany rehetra. 34Afatsika tamin'izay ny tanànany rehetra, nataontsika anatema ny tanànany rehetra, ny lehilahy, ny vehivavy, ny zaza, tsy nasiantsika niangana izy na dia iray aza. 35Fa ny biby fiompiny kosa sy izay mety ho babo tao amin'ny tanàna afatsika no norobaintsika ho antsika. 36Hatrany Aroera amoron'ny lohasan-driaka Arnòna, sy ny tanàna eo anatin'ny lohasaha, ka hatrany Galaada, dia tsy nisy tanàna sarotra anihina ka tsy afatsika, fa natolotry ny Tompo Andriamanitsika ho antsika daholo. 37Tsy nisy nakekenao anefa ny tanin'ny taranak'i Amona, ary na aiza na aiza koa teo amoron'ny ranon-driaka Jabaoka, na ny tanàna eo amin'ny tendrombohitra na ny toerana rehetra efa nandraran'ny Tompo Andriamanitsika anao. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0692 seconds